Vaovao - Ny fampiharana paompy Peristaltika amin'ny fitsaboana rano maloto
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, niaraka tamin'ny fandrosoan'ny indostrialy sy ny tanàn-dehibe dia nitombo haingana ny toekarena ara-tsosialy, saingy ny olana momba ny fandotoana taty aoriana dia nanjary olana lehibe mila vahana haingana. Ny fitsaboana rano maloto dia nanjary nilaina tsikelikely amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy fiarovana ny loharano. singa. Noho izany, ny fampivoarana ny teknolojia fanodinana rano maloto sy ny haavon'ny indostrialy dia fomba iray lehibe hisorohana ny fahalotoan'ny rano sy hanamaivanana ny tsy fahampian'ny rano.
Topimaso momba ny fitsaboana rano maloto:
Ny fitsaboana ny rano maloto dia dingan'ny fanadiovana rano maloto mba hamenoana ny fepetra takiana amin'ny kalitaon'ny rano amin'ny fivoahana ao anaty rano na ampiasaina indray. Ny teknolojia fitsaboana ny rano maloto ankehitriny dia mizara ho fitsaboana ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa ary tersiary arakaraka ny ambaratongan'ny fitsaboana.
Ny fitsaboana voalohany dia manala indrindra ny zavatra mavesatra mihantona ao anaty rano maloto. Ny fomba ara-batana dia matetika ampiasaina. Aorian'ny fitsaboana amin'ny ambaratonga voalohany, ny BOD amin'ny ankapobeny dia azo esorina manodidina ny 30%, izay tsy mifanaraka amin'ny fenitra famoahana. Ny fitsaboana amin'ny ambaratonga voalohany dia an'ny fitsaboana amin'ny ambaratonga faharoa.
Ny fitsaboana faharoa dia manala indrindra ny kôlôjidia sy ny zavatra voajanahary (BOD, COD) ao amin'ny rano maloto. Amin'ny ankapobeny, ny rano maloto tonga amin'ny fitsaboana faharoa dia afaka mahafeno ny fenitra famoahana, ary matetika ampiasaina ny fomba maloto mihetsika sy ny fomba fitsaboana biofilm.
Fitsaboana ambaratonga faharoa mba hanalana bebe kokoa ny loto mandoto sasany, toy ny fosforôra, ny azota, ary ny loto voajanahary, ny loto maloto, ary ny otrikaretina izay sarotra entina manodinkodina. Ny fomba lehibe dia misy ny fitrandrahana azota biolojika sy fosforika, fomba fanorana ny coagulation, fomba fanivanana fasika, fomba adsorption karbonika activated, fomba fifanakalozana ion ary fomba fandalinana electroosmosis, sns
Ilaina ny fitsaboana rano maloto:
Ao amin'ny dingan'ny fitsaboana ny rano maloto ao amin'ny ozinina, mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny rano fisotro, ilaina ny famahanana habetsahana marina ho an'ny famonoana otrikaretina voalohany, famonoana otrikaretina ary fanaraha-maso ny pH, ary paompy no ilaina ao anatin'ireny dingana ireny. Ireo akora simika toy ny ferida klôro, hypochlorite sodium, klôro, karbonina, sokay, sns., Matetika dia miteraka fihenan'ny paompy sy fanakanana paompy, ka miteraka fihenan'ny fahombiazan'ny paompy sy fiainana, indrindra ny electrolytes sokay sy polymer izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fiasan'ny paompy. , Ny vahaolana mahazatra dia ny fanoloana ny paompy vaovao. Mandritra izany fotoana izany dia hihena be ny fanatanterahana ilay flocculant mora tohina rehefa mandalo ny tahan'ny fiakarana avo sy ny fantsom-pamokarana mampivadi-po.
Noho izany, ny doka simika azo antoka, marina ary mahomby dia tanjon'ny asa fitsaboana rano maloto rehetra. Mila paompy maika ny indostria izay azo ampiasaina hiatrehana ireo fampiharana mitaky be indrindra hanatsarana ny fizotry ny famokarana, hampihena ny asa fikojakojana ary hampihenana ny vidiny. Hatsarao ny fahombiazan'ny fanodinana
Tombony amin'ny paompy peristaltika:
1. Ny paompy peristaltika dia manana fahaiza-manao matanjaka ary azo ampiasaina hampiakarana ny haavon'ny rano maloto azo tsaboina.
2. Ny paompy peristaltika dia manana herin'ny volo ambany ary tsy hanimba ny fahombiazan'ny flocculant rehefa mitondra flocculants mora tohina.
3. Rehefa mamindra tsiranoka ny paompy peristaltika dia mivezivezy ao anaty fantsona fotsiny ilay ranoka ary ny ranon-drantsaka voatohina dia manohina ny fantsom-paompy fotsiny ary tsy manohina ny vatan'ny paompy, noho izany dia tsy hisy ny fametahana, midika izany fa maharitra maharitra Elaela ihany koa ny paompy azo ampiasaina amin'ny famindrana tsiranoka samihafa amin'ny alàlan'ny fanoloana tsotra fotsiny ny fantsona paompy.
4. Ny paompy peristaltika dia misy toetrany avo lenta, izay afaka miantoka ny maha-marina ny habetsaky ny ranon'ny reagent fanampiny, mba hitsaboana tsara ny kalitaon'ny rano nefa tsy ampiana singa simika be loatra. Ho fanampin'izany, ny paompy peristaltika dia ampiasaina ihany koa mba hamindrana ireo santionany voazaha toetra sy ireo mpanadihady momba ny kalitaon'ny rano isan-karazany.
BT100S paompy peristaltika miovaova haingana hafainganam-pandeha ，Paompy peristaltika miovaova hafainganam-pandeha WT300S ，Paompy peristaltika miovaova hafainganam-pandeha WG600S, WT600S-65 paompy peristaltika fiarovana avo
Lead Fluid dia nifantoka hatrany tamin'ny famolavolana, ny R&D, ny famokarana ary ny varotra paompy peristaltika, nanolo-tena hanome ny mpampiasa vokatra vita amin'ny paompy peristaltika avo lenta sy serivisy teknika tonga lafatra, ary niezaka mafy nanao fanomezana ho an'ny fiarahamonina araka izay azontsika atao hisorohana ny fahalotoan'ny rano ary ny fiarovana ny loharanon-drano mangina no manome ny herinay ao ambadiky ny seho.